I-Surfside Hideaway (Ilungele Isilwane Esifuywayo w/AKUKHO IMALI) - I-Airbnb
I-Surfside Hideaway (Ilungele Isilwane Esifuywayo w/AKUKHO IMALI)
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Steve
*** QAPHELA *** Ikhishi negumbi lokugezela elisanda kulungiswa! I-spa entsha sha kusukela ngoJulayi 2021!
Isilwane esifuywayo esinobungani AKUKHO IMALI YOKUFUYA, ifulethi elihle elinendawo yalo yokungena yangasese, amafidi angama-2000 nje ukusuka ogwini! Indawo ethule kakhulu, ene-tv enkulu yesikrini, ikhishi eligcwele kanye nebhavu elinewasha nokomisa. Kukhona nobhavu oshisayo ongawusebenzisa futhi. Izilwane ezifuywayo zamukelekile ukuhlala nazo! Sizolangazelela ukuba nawe!
Omunye wabantwana bethu ababili wesaba imisindo emikhulu, ngakho asikwazi ukwamukela izithuthuthu. Siyaxolisa...
Ikhithi yakho yomuntu siqu. & geza
Indawo yokudlela yangaphandle yangasese ene-grill
Indawo yakithi yinhle kakhulu futhi ithule, kodwa futhi ikhululekile ngokwanele ukuzwa abantu bedlala umculo ngaphandle manje nangesikhathi sabo sokuphumula. Bonke omakhelwane bethu bahle futhi bahlale beqaphile. Iyindawo ephephile futhi idolobha lonke laseSurfside likulethela kulelo dolobhana elincane elizwakala sengathi ubulifuna.
ngicela ungithumelele umyalezo ngohlelo lokusebenza ukuze sixoxe.